वुबा नहुँदा पढ्नबाटै बञ्चित - Paschimnepal.com
पञ्चपुरी (सुर्खेत) । पञ्चपुरी नगरपालिकाका एक बालकले बुवा नभएकै कारण पढ्नबाट बञ्चित भएका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–९ तल्लो विजुका १६ वर्षीय जनक माझिले जनता माध्यमिक विद्यालयमा जन्मदर्ता पेश गर्न नसक्दा पढाइबाट नै बञ्चित भएका हुन् ।
विद्यालयले दुइ वर्ष पहिले माझिलाई जन्मदर्ता पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । तर माझिले बुवा नभएकै कारण जन्मदर्ता पेश गर्न सकेनन् । ‘धर्तीमा पाइला टेकेपनि जिन्दगीमा ठूलो सजाय भोगिरहेको छु’ माझिले भने, ‘बुवा नभएकै कारण जन्मदर्ता बनाउन सकिन र पढ्नबाट बञ्चित भइरहेको छु ।’
म यहिँ जन्मेको सबै समाजलाई नै थाहा भएपनि पहूँच नहुँदा संविधानले दिएको शिक्षा सम्वन्धी मौलिक अधिकार हनन भएको उनको दुखेसो छ । ‘८ कक्षा पास भएर ९ मा पढ्दै थिए । स्कुलले एसईईका लागि फारम खुलाएपछि जन्मदर्ता नहुँदा पढ्न पाइन’ जनकले भने ।
किन बनेन जन्मदर्ता ?
आमा भूमिसरा थापा र स्थानीय विष्णु माझीविच १६ वर्ष पहिले माया प्रेम बस्यो । तल्लो विजुकै माझी र थापाविच लामो समयसम्म प्रेमसम्बन्ध रह्यो । त्यहीँ बेला नै माझीको गर्भ रहेको भूमिसराको भनाई छ । शुरुमा विवाह गर्छु भनेर प्रेम ग¥यो तर पछि पेटमा बच्चा रहेपछि उसले मलाई तिस्कार ग¥यो’ भूमिसराले भनिन्, ‘उसैको गर्भबाट बच्चा जन्मियो र विवाह नगरेरै छोराको लागि अन्त कहीँ विवाह गरिन् । तर आज जन्मदर्तामा बुवाको नाम नहुँदा पढ्नबाट बञ्चित भइरहेको छ ।’
सानै उमेरमा मेरो माझीसँग लभ रहेको र सोही माया प्रेमका कारण जनक जन्मिएको भूमिसराको भनाई छ । ‘मैले बारम्बार विष्णुलाई फोन गरेर जन्म दर्ता बनाइदिन आग्रह गरेपनि उसले कहिल्यै कुरा सुन्दैन’ भूमिसराले थपिन्, ‘उतिबेला मलाई विवाह गर्छु भनेरै मायाप्रेममा फकायो । तर अहिले उसले अर्कैलाई विवाह गरेर एक छोरा एक छोरी जन्माइसकेको छ ।’
माझि हाल कोहलपुरमा ट्राफिक प्रहरी पदमा कार्यारत छन् । उसलाई जन्मदर्ता गराइदिन आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको भूमिसराले बताईन् । थापाले वडापालिकामा पनि उनी पुगेकी थिइन् तर त्यहाँ बाबुको नागरिकता खोज्दा जनकले पढ्नबाट बञ्चित छन् । ‘वडापालिकाले बुवाविना जन्मदर्ता गर्न मिल्दैन भनेर फिर्ता पठायो ।
त्यसपछि थापाले कहाँ के गर्नु पर्छ भन्ने मेसो पाइन’ उनले भनिन्, ‘विष्णुको नाउँमा अहिलेसम्म कहीँ पनि उजुरी दिएकी छैन् तर विष्णुसँग छोराको जन्मदर्ता बनाइदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेकी छु, मानेको छैन् ।’
विष्णुले भने डिएनए जाँच गरेर मात्रै दिन्छु भन्ने अडान लिएको बताएकी भूमिसराले अहिलेसम्म केहि नगरेको बताइन् । ‘अन्तिम विकल्प मुद्दा दिएरै भएपनि छोराको अधूरो पढाइ पूरा गराउने लक्ष्य छ’ भूमिसराले भनिन् ।
के भन्छन् माझी ?
यता, विष्णु माझीले भूमिसरासंग कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरे । ‘मलाई नै थाहा नै छैन । आधारहीन रुपमा केहिदिनदेखि गाउँमा प्रचार भइरहेको मैले सुनेको छु’ माझीले भने, ‘नितान्त रुपमा ममाथि आरोप लगाएको छ । यो कुरामा कुनै सत्यता छैन् ।’
१७ वर्षसम्म उनी कहाँ थिइन र अहिले मलाई यसरी आरोप लगाउनुको कारण माग माझीले गरे । माझीले यदि प्रमाणित भएको खण्डमा छोरा स्वीकार्न तयार रहेको बताए । तर आफुले कोही कसैसँग सम्वन्ध राखेर कसैको भविष्य बर्बाद नपारेको दाबी गरे ।
उजूरी आएन नगरपालिका ?
पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खडकाले नगरपालिकामा यस्तो खाले कुनै पनि उजुरी नआएको बताए । तर उनले विद्यालयले मानेको खण्डमा नगरपालिका जीवनका लागि जन्म भएको प्रमाणपत्र दिन सकिने र सोही आधारमा उनले अध्ययन गर्न सक्ने बताए ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ १०, २०७५ 7:00:08 PM
Prevप्रेस यूनियन सुर्खेतको अबैधानिक अधिवेशन
Nextप्रेस युनियन सुर्खेतकाेे अध्यक्षमा खड्का